Dlulisa nayiphi na ifomathi yomsindo kuye nawuphi na uMamkeli woMbane oqhelekileyo - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supporter Qhagamshelana: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » Dlulisa nayiphi na ifomathi yeaudio kuye nawuphi na umsunguli we-FM
Ngaba uyafuna ukwakha isikhululo sakho seRadio? Thenga umsunguli wethu we-FM, Yibethe nje, kwakha indawo yakho ye-Sation ye-FM ukuhambisa nawuphi na umsindo owuthandayo, emva koko usemoyeni! Emva kokuba usazi umsasazi wethu we-FM, uya kuba nemincili njengam! Sele siyithengisa le nto iminyaka emi-5. Ithengisiwe kakuhle kakhulu. Ke ndiyayazi kunye nentengiso yayo. Le yimveliso ekhethekileyo kakhulu kwaye inqabile. Abantu abaninzi bayayifuna, kodwa abayifumani. Kungenxa yokuba ngabantu abaliqela kuphela abathengisa le mveliso yalapha emhlabeni. Sinabaxumi abasasaza kwi-FM kwilizwe liphela, hayi kuphela abathengisi kodwa nabathengi. Nangona kunjalo, abantu abaninzi bayifuna ngokwenene. Baninzi nabantu abangayaziyo le mveliso. Abazi ukuba yintoni kwaye ungayisebenzisela ntoni. Kodwa emva kokuba beyazi le mveliso kunye nomsebenzi wayo, baya kuba nomdla kuyo kwaye banqwenela ukuba neyakho. Nabani na oyibona imveliso yam kwaye oyaziyo le mveliso angathanda ukuyithenga. Ndinomthengi wase-India othenge isidlulisi sethu se-FM. Unoyolo kwaye wandixelela ukuba elinye lamaphupha akhe kukwakha isikhululo sikanomathotholo kwaye ngoku amaphupha akhe azalisekisile!
Ungayisebenzisa nangaliphi na ixesha nangasiphi na isizathu. Ikhaya lakho lonke, kwiyadi yakho yangasemva.Iikrisimesi ezibonisa ukukhanya, emsebenzini wakho, echibini lakho, amaziko omzimba, kwimoto yakho, emphemeni okanye kwi-pation, kwiindawo zokulungisa, kwisikhephe sakho, ngelixa uphumla kwibhafu eshushu, iiyunivesithi, ngelixa umise inkampu, kwigaraji yakho, iicawe, kunye nethiyetha yangaphandle, izibhengezo zesikolo, iingxowa-mali zokuhamba kunye nokuhamba-i-Thons, amaqela ebhlokileyo ebumelwaneni, ngelixa usendleleni. kwaye nangokunjalo…
Ijukebox yeselfowuni - Dlulisa umsindo wakho kwikhompyuter yakho kwincwadana yakho okanye kwisidlali seMP3 kwisamkeli sakho semoto ye-FM okanye nayiphi na irediyo ye-FM.
Isikhululo sikanomathotholo esakho i-FM party - Dlulisa nayiphi na ifomathi yesandi ukusuka kwikhompyuter yakho, i-iPod okanye nasiphi na isidlali seMP3 kuzo zonke iRadiyo ekhayeni lakho, ukhetha uluhlu lwadlala-olukhululekileyo lokudlala kunye UKUVUZA AKUKHO IMALI YENYANGA.
MP3 / MP4 Player - Mamela ividiyo yakho player ye-MP3 / MP4 ngayo nayiphi na into oyifumana kuyo unomathotholo we-FM ekhaya lakho, eofisini okanye emotweni.
Irediyo ehleliweyo yeOfisi yakho okanye yeshishini - Dlulisa umculo wakho owuthandayo okanye i-intanethi yokusasaza iaudio kuyo yonke iofisi yakho kunye nabasebenzi osebenza nabo.
Isatellite Radio - Dlulisa nasiphi na isandi esivela kwisamkeli sakho serediyo kwisikhululo sakho kubo bonke abafumana i-FM ekhaya lakho okanye eofisini.
Umsindo wethiyetha yasekhaya - Dlulisa nasiphi na isandi esiphuma kwikhompyuter yakho okanye kwisidlali seDVD kubo bonke abafumanekayo kwi-FM. (* Iadaptha ekhethekileyo yokuguqula intambo inokucelwa ukuba uqhagamshele kwiijekethi zeRCA, ezithengiswe ngokwahlukeneyo)
I-PA engenantambo - Dlulisa ilizwi eliphilayo okanye irediyo elungiselelwe kwangaphambili kubo bonke abo bafumana i-FM phakathi kuluhlu. Ifanelekile kukhenketho lwangaphakathi / lwangaphandle, ukukhuthaza ukuthengisa, ukukhuthaza ishishini, iinkonzo zokuguqula icawe, indali ephilayo, njl. Njl.
Irediyo ye-Intanethi - Dlulisa isikhululo sakho serediyo osithandayo kwi-radio radioiver yakho okanye kwi-headset ye-FM.
Ishishini / uphawu lokuthengisa izindlu nomhlaba - Nyusa uluhlu lwakho lwasekhaya okanye ishishini kubathengi abanokubakho abaqhuba. Sebenzisa izwi okanye nawuphi na umyalezo orekhodwe xa udityaniswa kwisidlali somsindo okanye player MP3.
Dlulisa umdlalo ngokudlala umculo kumdlalo wezemidlalo - Dlulisa umdlalo ngokudlala kubo bonke abakhoyo; Bonke abakhoyo bafuna kuphela uMmiselo woRadiyo oqhelekileyo ukuze bamamele intetho.
Dibanisa izicelo ezininzi….
Iyahambelana ne: iPod, isidlali seMP3, irediyo yesatellite, isidlali seCD, iPDA, isidlali seDVD, iPC / MAC, ikhompyuter yedilesi / incwadana, TV kunye nokunye ..
Kulula ukuseta. Ndiyazi ukuba uninzi lwabantu alunqweneli okanye alunakukwazi ukuzenzela eyalo FM, kuba uninzi lunokutya iiyure zakho .Kodwa ekugqibeleni, ungaqinisekanga ukuba izakusebenza kanye emva kokudibana.Bonke bayathanda ukusetyenziswa ngokulula. Iiproducuts ezilula. Ke kuya kufuneka uthenge isixhobo sethu sokuhambisa iMultioni, awudingi xesha lokwenza umsasazi we-FM kwaye akufuneki uzibuze ukuba izakusebenza ngokufanelekileyo na. Umsasazi we-FM kulula kakhulu ukuseta. ayigqitywanga njengombono wakho. Le yiti, iplagi nje, akufuneki ithenge nto. nokuba umelwane wethu ongumama oneminyaka engama-72 ubudala angawusebenzisa lula.Bantu banokwabelana ngokukhululekileyo ngomculo wabo kude nentambo kwindawo ethile. Kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ngokulula njengokuxhuma iDVD kwiTV. Ukucwangciswa okulula kwestudiyo sakho kwimizuzu eli-10!
Yisebenzise kwilizwe jikelele
Ungasisebenzisa isigqithisi se-FM naphi na emhlabeni ngenxa yeadaptha yamandla ye-110V -220V AC. Kwaye imvamisa yi-76-108 Mhz, igubungela lonke ulwaziso loluntu kwirediyo ye-FM, nkqu naseJapan!
Ilula, ithembekile iAntena.
Awudingi naluphi na ulwazi lwe-elektroniki lokufaka i-eriyali, yonga nje kwaye usebenze kakuhle.
Umdlulisi akagcini nje ngokuba nomgama omkhulu wokuhambisa kodwa usasaza kwi-stereo ye-FM.
Zonke kwiphakheji enye
Yonke into oyifunayo ibandakanya kwiphakheji.
Sebenzisa itekhnoloji ye-PLL
Awunokwazi ukuba buyintoni ubuchwephesha be-PLL .Ezinye izinto ezihambisa i-FM azinabo ubuchwephesha be-PLL, ke lona uphawu luya kuhambisa ngelixa uhambisa. Umsasazi wethu we-FM unetekhnoloji ye-PLL, ukuba ukhetha i-99.1 Mhz njengamaza akho, i-PLL iya kukugcina kulolo lujikelezo ngaphandle kokungqongileyo.